WAR CUSUB: Gudoomiye Jawaari oo shir gudoomiyey kulanka Guddiga Joogtada ah ee baarlamaanka & Ajedanaha kalfadhiga Sabtida oo lashaaciyey waxa looga hadlayo. – Puntlandtimes
WAR CUSUB: Gudoomiye Jawaari oo shir gudoomiyey kulanka Guddiga Joogtada ah ee baarlamaanka & Ajedanaha kalfadhiga Sabtida oo lashaaciyey waxa looga hadlayo.
MUQDISHO(P-TIMES)- Gudoomiyaha golaha baarlamaanka Faderaalka Soomaaliya Maxamed Sh Cismaan Jawaari ayaa shir gudoomiyey kulan gaar ah oo ay yeesheen guddiga joogtada ah ee golaha shacabka, kaas oo looga wada hadlay arrimaha ku saabsan xiisadaha siyaasadeed iyo sidii loo socodsiin lahaa howlaha golaha ee ku jira kalfadhigooda bilowgiisa.
Guddiga joogtada ah ayaa isku afgartay in sidda uu qabo xeer hoosaadka golaha shacabka la meelmariyey ama ku dhaqmo uu buray mooshinkii laga keenay Gudoomiye Jawaari oo uu fashilmay, maadaama muddo 10 cisho gudahood ay ahayd in laga wada hadlo ama laga doodo taas oo ku e’ekeyd maalintii shalay ee lasoo dhaafay.
Xildhibaanada ayaa loogu baaqay in ay midnimo iyo wadajir muujiyeen si ay ugutaan waajibaadka Qaran ee ay bulshada Soomaaliyeed u hayaan, ayna tahay in ay ilaaliyaan kala qeybin kutimaada golaha, taas awgeedna ay tahay In Sabtida ay furmaan kalfadhiga baarlamaanka.
Ajendaha laga doodi doono Sabtida nagu soo beegan ayaa lagu cadeeyey shirka caawa, waxaana la sheegay in looga wada hadli doono arrimaha ku saabsan Is fahamdarida ka taagan deegaanka Balad-Xaawo, waxaana loo yeeri doonaa xubno katirsan dawladda Faderaalka ee Soomaaliya, soo jeedintan oo katimi golaha baarlamaanka, ayna horey wafdi ugu direen magaalada Balad Xaawo, kuwaas oo aan wali warbixin soo celinin.
Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta xaafiiskiisa si rasmi ah u fariistay tan iyo markii uu aqbalay mooshinkii laga keenay oo ku beegnaa 14-kii bishan oo uu joojiyey qaabilaada Shaqsiyaadka kala duwan, uuna xooga saarayey oo kaliya iska difaacida weerarada uga imaanayey Madaxtooyada Soomaaliya.